Markab ay la socdaan Ciidamo badan oo loo soo diray Xeebaha Somalia iyo ujeedka oo la ogaaday – ASM Raage
Markab nuuca dagaalka ah oo leedahay dowlada Shiinaha ayna la socdaan ciidamo aad u hubeesan ayaa loo soo diray xeebaha Soomaaliya si uu galbiyo maraakiibta rayidka ah ee Ganacsiga ee mara biyaha Soomaaliya.
Markabkan oo xambaarsan Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helicopters, Gantaallada wax burburiya & Doomo nuuca dheereeya ayaa kasoo shiraacday Dekedda ciidamada milatariga Shiinaha leeyihiin ee Zhoushan oo kutaala gobolka Zhejiang.
Dowlada Shiinaha ayaa sheegtay in markabkan loogu tala galay in uu galbiyo maraakiibta ganacsi ee isaga kala goosha qaar kamid ah wadamada caalamka ee adeegsanaya Gacanta Cadmeed & Biyaha Soomaaliya.
Qaar kamid ah wadamada Caalamka ayaa Maraakiib ay la socdaan ciidamo usoo dira biyaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan Maraakiibta marta biyahaasi oo laga cabsi qabo in ay weeraraan kooxaha burcad badeeda .
Axmed Madoobe & Taliyaha AFRICOM oo qodobo Muhiim ah ka wada hadlay (Sawirro)